म आफै जन्मेको हुँ: रोशन | कथा | गनेस पौडेल | दशैं साहित्य विशेष
म आफैं जन्मेको हुँ: रोशन
रोशन जन्मिंदै सात वर्षको भएर जन्मेको थियो । त्यसैले जन्मनेबित्तिकै मैले उसलाई स्थानीय अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयको कक्षा–१ मा भर्ना गरिदिएको थिएँ । ऊ नियमित स्कूल त जान्थ्यो, पठनपाठनमा मिहिनेत पनि निकै गर्थ्यो तर खै किन हो उसको दिमागमा पढेको कुरा घुस्तै घुस्तैनथ्यो ।
साह्रै लद्दु भएर निस्कियो ऊ । खेलकुदमा पनि उसलाई खास रुचि थिएन । कुनै चित्र बनाउने, कविता लेख्ने, अभिनय गर्ने वा यस्तै कुनै सिर्जनात्मक गतिविधिमा पनि उसको रुचि वा सामथ्र्य देखिएन ।
“पिताजी, तपाईंले मनमनै भए पनि मलाई जन्माएर असाध्य पुनित काम गर्नुभएको छ । म तपाईंको मानस–पुत्र भएर जन्मेको भए पनि यसरी सधैंभरि तपाईंको मनमा बसेर हुँदैन । दिनका दिन तपाईंसँग मनोगफमा भुलेर हुँदैन । यसो गरेमा मानिसहरूले तपाईंलाई बर्बराउँदै हिंड्ने बौलाहा भन्न पनि बेर लगाउँदैनन् । त्यसैले मलाई तपाईंले आफ्नो मनबाट बिदा दिनुहोस् । म तपाईंको मनोलोकबाट निस्केर सर्वप्रथम ब्रह्माण्डको विचरण गर्न चाहन्छु । त्यसपछि ब्ल्याकहोल जस्तै ब्रह्माण्डकै कुनै अघोर अन्धकारमा ऐकान्तिक तपस्यामा लीन हुन चाहन्छु ।”
“हजुर त्यस्तै । ती रोशन भाइसँग एउटा विशेष अन्तर्वार्ता लिनुपर्‍यो । स्वामीजी आफैंले ।”
“त्यो त ठीक छ, गरुँला । तर ती युवकलाई म कसरी भेट्न सक्छु त ? उनको कुनै सम्पर्क छ ?”, मैले डराई डराई सोधें । कतै गिरीजीले ‘ऊ त तपाईंकै मानस सन्तान हो । थाहा नपाएको स्वाङ पारेर मलाई उल्लु बनाउन खोज्ने ?’ भनेर झपार्छन् कि भन्ने डर आफैं आफैं गहिरो भएर आयो ।
तर उनले त्यसो भनेनन्, “रोशनको बाँकी डिटेल स्वामीजीको इन्बक्समा आइसकेको होला । उनी माथिको ‘रिसर्च पेपर’ पनि पठाइदिएको छु । उनी पोखराको मझेरी–पाटनस्थित लामेपोखरीको नजिकै बस्छन् । उनको आफ्नै मोबाइल नम्बर रहेनछ । तर उनकी दिदीको भने छ, टिप्नुस त ।”
अंक टिपेर सकेपछि म फेरि झस्कें । यो त त्यही नम्बर थियो जसबाट मेरो एकजना दिवंगत मानस–पुत्र जोस्मणिलाई रहस्यमयी तर प्रेमिल म्यासेज आउने गर्थ्यो । त्यो पनि तारन्तार । उसको नायकत्वमा लेखिएको यात्रोपन्यास ‘पैताला’मा मैले यसका रमाइला प्रसंग टिपोट गरी गरी पढेको थिएँ ।
त्यही नम्बर हो कि होइन भन्ने थाहा पाउन मैले हतार हतार मोबाइलको ‘कन्ट्याक्ट लिष्ट’ चहारें । नभन्दै ‘मिस्टिक लेडी’को नाममा त्यो ‘सेभ’ भएको रहेछ ।
फोन नम्बर ठ्याक्कै मिलेको थाहा पाएपछि मलाई भाउन्ना छुट्यो । केही बेर घाइते माहुरी झैं भुन्भुनिएँ । यस्तो कसरी हुनसक्छ ? मेरी मानस–पुत्री नर्मदा कसरी त्यो रहस्मयी स्त्री हुनसक्छे ? मेरा पुत्र–पुत्रीहरू कसरी एकआपसमा प्रेम गर्न सक्छन् ? यसरी आफ्नै सन्तानहरू बीचमा हाडनाता सम्बन्ध हुन थाल्यो भने मान्छे–जातको अनुवांशिक सामथ्र्य पूरै खस्केर जानेछ । सोचेर म बिसारै चिन्तित भएँ । आफ्नो सोचाइको वाक्यभित्र पसेको ‘अनुवांशिक’ शब्दले मलाई पुन गिरीजीसँग कुराकानी भैरहेको सम्झना भयो । सोचाइबाट सम्हालिंदै मैले उनलाई भनें, “हस् म केही न केही अवश्य गर्छु ।”
रोशनलाई भेट्न भनी भोलिपल्ट बिहानै म मझेरी पाटन हान्निएँ । पोखरा भनेकै पाटन, चौर र खर्कहरूको शहर हो । मझेरी पाटन पोखराको सबैभन्दा पुरानोमध्येको एक मानव वस्ती हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो । पोखराकै बासिन्दा भएर पनि म पहिलो पटक मझेरी पाटन जाँदै थिएँ । त्यो पनि आफ्नै मानस–पुत्रलाई भेट्न । उसको अन्तर्वार्ता लिन ।
प्राप्त नक्शाको ‘जीपीएस’लाई पछ्याउँदै म रोशनको निवास पुगें । तर गिरीजीले भनेको जस्तो छेउछाउमा कुनै लामे पोखरी देखिएन । बरु घरको छेउमा एउटा विकासे पार्क थियो जसलाई पूर्णतया झाडीले कब्जा जमाएको थियो । ‘पोखरी पुरेर पार्क बनाएछन्’, सोचेर खिन्न भएँ । तर अर्काको घर छिर्नु अघि खिन्न हुनुहुँदैन भनेर खिन्नतालाई दबाएँ ।
अर्काको गृहपरिधिमा सवारी बोकेर के छिर्नु ? साइकललाई घर बाहिरको बिजुलीको खम्बामा चाबीले बाँधे । त्यो त्यही खम्बा थियो जसबाट ऊ बिजुलीको झट्का खाएर भुईंमा बजारिएको थियो ।
तगारोको गरालाबीचबाट ज्यान छिराएर म उसको घरको परिधिभित्र दाखिला भएँ । रोशन आँगनमा घाम ताप्दै आगन्तुक माहुरीहरूलाई चास्नी हालिरहेको थियो । हरेक बिहान माहुरीलाई चास्नी–भोज दिने उसको बाल्यकालीन सोख रहेछ । आफ्नै मानस पुत्र भए पनि मलाई उसको यो बानीको बारेमा कल्पना समेत थिएन ।
मलाई लाग्दैन अरू कुनै थप भूमिका यहाँ राख्नुपर्छ । अब म तपाईंलाई सोझै रोशन र म बीचमा भएको कथित अन्तर्वार्तामा प्रवेश गराउँछु । पढेर प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
गनेस :मलाई चिन्नुहुन्छ ?
रोशन : चिन्छु किन नचिन्नु ? नामै गनेस, मलाई पनि गनेस । तपाईंलाई नगनेर भयो त ? (हा हा हा)
गनेस : किन चिन्नुहुन्छ मलाई ? अर्कालाई त्यसै चिन्दिने ? मलाई प्रसिद्ध हुन झ्याऊ लाग्छ ।
रोशन : सही कुरा गर्नुभयो । मलाई पनि प्रसिद्ध हुन झ्याउ लाग्छ । म तीन अर्ब सतहत्तर करोड वर्षभन्दा धेरै बाँचेको छु । कहिले पानीमा । कहिले जमीनमा । कहिले कीटाणु भएर, कहिले जनावर भएर । यत्रो लामो आयुमा मलाई चिन्नेहरूको संख्या गनेर साध्य छैन । त्यसैले मेरो लागि प्रसिद्धी भनेको लुते आनन्द हो । खास आनन्द रोगले छोड्दा हुन्छ, कन्याउँदा हुँदैन ।
हुन त तपाईं पनि त्यति नै वर्ष बाँच्नुभएको हो भन्ने मलाई थाहा छ । तर मान्छेको जातलाई आफ्नै अस्तित्व सावित गर्न पनि सबुत चाहिन्छ । तपाईंसँग सबुत छैन । मसँग छ । (हा हा हा)
(उसको बोलीपिछ्यै छुट्ने हाँसो देखर मलाई ताज्जुब लाग्यो । आफ्नो मानस पुत्रका लागि मैले यो विघ्नको हँस्यौलीपन सुहाउन सक्छ भनेर कल्पनै गरेको थिइनँ ।)
गनेस : कुरो त सही हो । अब वार्तालापको बाटो बदलौं नत्र पाठकहरूलाई मज्जा नआउला । म सोध्न चाहन्छु, तपाईंले आफ्नो थर किन छोड्नुभयो ? थर भनेको त अनुवंशको लहरो होइन र ? अनुवांशिक स्मृतिका कारणले चर्चित भएको मान्छेले थर छोड्न मिल्छ ?
रोशन : गनेसजी कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न हुने खाले हो कि नहुने खाले हो म यकिन हुन सक्दिनँ । त्यसैले यसलाई ‘अफ् द विट’ नै राखिदिनुहोला ।
खासमा कुरा के भने मलाई बाबुतिर र आमातिर दुवैका पुर्खाहरूले भोगेको सम्पूर्ण स्मृति हुबहु हुन्छ । यसैले म भनेकै मेरो पुर्खाहरू हुन् । मेरो पूर्वजन्म भनिदिंदा अझ उत्तम होला ।
तपाईंको प्रश्नमा जाऊँ । अब मेरो अहिलेको थर त थापा हो भनेर तपाईंलाई थाहै छ । मैले के थाहा पाएँ भने यो बाबुको थापा थर मैले जुन लिएको छु त्यो अनुवांशिक थर होइन रहेछ । आठौं पुस्ता अघिकी मेरी हजुरआमा छिमेकको घरमा काम गर्ने दासबाट गर्भवती भएकी रहिछिन् । त्योभन्दा अगाडि पनि यस्ता घटना कैयन् पटक भएको रहेछ । जुन थापाको थर मलाई थोपरिएको छ त्यसले कुनै अनुवांशिक इतिहास बताउने रहेछन् भन्ने प्रष्ट भयो ।
मैले आमातिरको अनुवांशिक थर लेख्ने बारेमा पनि सोचेको थिएँ । त्यताबाट लेख्दा धेरै शुद्ध हुने संभावना हुन्थ्यो । तर सोचेजस्तो नहुने रहेछ ।
अब हेर्नुस्, मेरी आमा माइतमा छँदासम्म अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । तर आमाकी आमा अर्थात् मेरी हजुरआमा भने गुरुङ्सेनी हुनुहुन्थ्यो उनकी पनि आमा भण्डारी हुनुहुन्थ्यो । भण्डारीकी आमा कार्की हुनुहुन्थ्यो । अनि ती कार्की जुन थिइन्, तिनकी आमा चाहिं थपिनी हुनुहुन्थ्यो । त्यो पनि कुन भन्नु न ? हाम्रैथापा खलककी अर्थात् मेरै बाबुको कुलकी । आमाहरूलाई बाबु वा लोग्नेको थर थोपरिने भएपछि यस्तो हुने त भैहाल्यो ।
मैले के बुझें भने बाबुतिरको होस् कि आमातिरको, यो थर र जात जनाउने अनुवांशिक अहम् पूरै वकबास मात्रै हो । त्यसपछि मैले थर लेख्न छोडिदिएँ । जात जनाउन पनि छोडिदिएँ । म त भन्छु, तपाईंले पनि लेख्न छोडिदिनुस् । आफ्ना सन्तानलाई पनि लेख्न नलगाउनुस् ।
गनेस :तपाईंलाई आफू सबैभन्दा पहिलोपटक जन्मँदाको पनि सम्झना छ ?
रोशन :त्यस्तो मिहिन सम्झना छैन । त्यो बेला मेरो शरीरमा अहिलेको जस्तो इन्द्रियहरू थिएनन् । स्पर्शको लागि छाला पनि थिएन । हेर्नलाई आँखा र सुन्नलाई कान थिएन । त्यसैले तपाईंले बुझ्ने तरिकाले म पहिलो पटक उत्पत्ति हुँदाको अनुभूति बताउन सक्दिनँ ।
खासमा के भने पहिला म छँदै थिइनँ । तर एकदिन अचानक मैले आफूलाई समुद्र किनारका चट्टाने छिद्रमा जन्मिसकेको अवस्थामा पाएँ । मेरो आडमा मजस्ता अनगिन्ती अरू पनि जन्मेका थिए । तर अरूहरू पनि त्यहाँ जन्मेका थिए भनेर म तपाईंलाई बुझ्ने तरिकाले बताउन सक्दिनँ । मैले भनिहालें त्यो बेला इन्द्रियहरूको विकास भएकै थिएन ।
गनेस : अलिक प्रष्ट पारिदिनुस् न तपाईं कसरी जन्मिनुभयो ? त्यो बेलाको पृथ्वी कस्तो थियो ?
रोशन : त्यो मेरो पहिलो जन्माई थियो । त्योभन्दा अगाडि म जन्मेकै थिइनँ । मैले गनेको पनि छैन त्यसपछि म कति पटक जन्में । गनिसाध्य पनि छैन ।
त्यो बेला मैले पृथ्वी पूरै घुमेकै थिइनँ । घुमेकै भए पनि त्यसलाई हेर्ने आँखा मसँग थिएन ।
गनेस : तपाईंलाई के लाग्छ, धर्मग्रन्थमा भनेझैं तपाईंको पहिलो जन्म ईश्वरले गराएको हो ?
रोशन : मैले भनिहालें मेरो पहिलो जन्मका लागि मेरा बाबु–आमा कोही थिएनन् । भए त मैले सम्झँदो हूँ नि ! सबै अनुवंशको स्मृति फर्किंदा त्यो पनि फर्किंदो हो । म आफैं जन्मेको हुँ । अचानकसँग जन्मेको हुँ ।
गनेस : तपाईंले “आफैं जन्मेको हुँ” भन्नुभयो । मैले अल्लि बुझिनँ । के तपाईं आत्मनिर्णयले जन्मिनुभयो ?
रोशन :यो मेरो आत्मनिर्णय थियो भनुँ भने जन्मनुभन्दा पहिल्यै जन्मने ‘विचार’ कताबाट आयो भनेर आत्मप्रश्न उब्जिन्छ, त्यसको जवाफ मसँग छैन । तर म त जन्में नि त । यी हेर्नुस्, म हुनुको प्रमाण तपाईंको अगाडि उभिएकै छु ।
म एउटा जीव मात्रै होइन दुनियाँका सारा अजीव कुरा पनि आफैं उत्पन्न भएका हुन् । जीव भए जन्मिन्थे । अजीव भएको हुनाले उत्पन्न भए । ‘विग ब्याङ्ग’ भनेको के हो त ? पहिला केही पनि थिएन, शून्य थियो । अचानकसँग महाविस्फोट भयो र ब्रह्माण्ड जन्म्यो भनेको होइन ? जसरी पदार्थ आफैं जन्म्यो, ऊर्जा आफैं जन्म्यो, जीवको आदिस्वरुपमा छँदा म पनि आफैं जन्मेको हुँ ।
यो ब्रह्माण्डमा जन्मन बाँकी अझै कति कुरा छन् । आकाशका अनेकन् ग्रह, उपग्रहमा भएका कैयन् अवयवहरू अझै जन्मेका छैनन् । एकदिन पालो आउला र ती पनि जन्मलान् । तिनलाई ईश्वर वा अरू कसैले जन्माइदिने होइन । खुबी भए, वातावरण भए आफैं जन्मिन्छन् नत्र त्यत्तिकै बस्छन् ।
गनेस : खुबी र वातावरण ? अल्लि बुझिनँ ।
रोशन : तपाईंसँग खुबी भएर मात्रै हुँदैन त्यो खुबी निखारिने वातावरण पनि हुुनुपर्छ । तपाईं भन्नुस् त, माथिल्लो डोल्पाको विकट गाउँमा जन्मे हुर्केको मान्छे कहिल्यै फूटबल खेलाडी हुन सक्ला त ? स्कूलको मुखै नदेखेको मान्छे प्रोफेसर हुन सक्ला ? वातावरण भनेको अवसर हो, बाह्य शक्ति हो । खुबी भनेको आन्तरिक शक्ति हो, आत्मनिर्णय हो ।
गनेस : तपाईंले अघि ‘आफैं जन्मिन्छन्’ ? पनि भन्नुभएको थियो । त्यसको अर्थ, जन्मिनु भनेको आत्मनिर्णयले हो ? माफ गर्नुहोला मैले एउटै प्रश्न दोहोर्‍याएर सोधें ।
रोशन : सोधेर केही बिग्रेको छैन । माफी माग्नै पर्दैन । जति पटक सोधे पनि खासै फरक पर्दैन किनकि मैले यो प्रश्नको उत्तर अघि भर्खरै दिइसकेको छु ।
गनेस : तैपनि एक पटक फेरि भनिदिनुस् न ?
रोशन : मोबाइलमा रेकर्ड गर्नुभएको छ त । त्यसैमा सुन्नुस् ।
गनेस : खैर ठीकै छ । कुरो मोडौं । क्लिनिकल्ली स्पिकिङ, शरीर त फगत एक भौतिक पदार्थ मात्रै हो । शरीरको आदि छ र अन्त्य पनि छ । किन छ भन्देखिन, शरीरको पोस्टमोर्टम रिपोर्ट तयार गर्न सकिन्छ ।
रोशन : (कुरालाई समर्थन जनाउन तर बीचैमा रोक्दै) ज्यू ज्यू ! शरीर जैविक पदार्थ भएकोले यसको पोस्टमोर्टम रिपोर्ट तयार पार्न सकिन्छ । जन्म शरीरको आदि हो र मृत्यु त्यसको अन्त्य । तर जहाँसम्म चेतनाको कुरा छ त्यसको न आदि छ न त अन्त्य नै ।
स्पिरिचुअल्ली स्पिकिङ, चेतना अनन्त छ । र, मलाई त कहिलेकाहीं के लाग्छ भने म फगत चेतना मात्रै हुँ । भन्नाले आत्मा मात्रै हुँ । अब तपाईं नै भन्नुस्, चेतनाको पोस्टमोर्टम रिपोर्ट तपाईं कसरी तयार पार्न सक्नुहुन्छ ?
गनेस : भनेसी, तपाईंको विचारमा आत्मा र चेतना भनेको एउटै कुरा हो ?
रोशन : म पहिलो पटक जन्मनुभन्दा पहिला, अर्थात् पृथ्वीमा पहिलो जीवको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिला यहाँ पदार्थ र ऊर्जा मात्रै थियो । त्यसैबाट म अचानकसँग जन्में । किनकि मलाई कसैले जन्माएन, आफैं जन्में, त्यो जन्माई मेरो आत्मनिर्णयको विषय थियो । आत्मनिर्णय भनेकै चेतना हो । चेतनशील हुनु भनेकै आत्मनिर्णय गर्न सक्ने हुनु भनेको हो ।
गनेस : यसो गरौं, एकछिन शरीर र चेतनामै अल्झौं, ल ? आदि र अन्त्य अर्थात् जन्म र मृत्युकै कुरा गरौं । त्यसपछि अनन्त अथवा अनादि बारे चर्चा गरौंला । भनिन्छ जन्म एक संयोग हो . . .
रोशन : (बीचमा रोक्दै) कसले भन्यो जन्म एक संयोग हो ? यस्तो अश्लील, अनैतिक तथा अनर्गल घोषणा जारी गर्ने स्वाँठ को हो ? तपाईंको निम्ति जन्म एक संयोग होला, मेरो निम्ति भने जन्म एक छनोट हो । रोजाइ हो । बर्थ इज माइ च्वाइस ।
मेरो जन्म मेरो आत्मनिर्णय थियो भनेर भनिसकें त ।
म कहाँ जन्मने ? म कहिले जन्मने ? म किन जन्मने ? या जन्मँदै नजन्मने ? यो मेरो छनोटको विषय हो ।
गनेस : भनेपछि पोखरामा जन्मनु तपाईंको नितान्त व्यक्तिगत छनोट हो रहेछ भनी मैले बुझ्नु पर्‌यो, होइन ?
रोशन : घुमाएर सोध्नुस् कि सोझै, जैविक भाषामा बोल्दा जन्म आत्मनिर्णयको विषय हो । व्यक्तिगत छनोटको विषय हो । यसमा पोखरा जस्तो कुनै ठाउँ जोड्नुस् कि वि.सं. २०५३ जस्तो समय । केही फरक पर्दैन ।
गनेस : भनेसी तपाईं त ब्रह्माजी जस्तै पो हुनुभयो त । स्वयम्भू भन्छन् नि ! आफैं जन्मेको, कसैले नजन्माएको ?
रोशन : ‘अहम् ब्रह्मास्मि !’ भनेकै छन् त । तर जुन बेला पहिलो पटक म जन्में, म मात्रै जन्मेको थिइनँ । मजस्तै असंख्य धेरै एककोषीय जीवहरू एकसाथ जन्मेका थिए । तीमध्ये कति अहिले घाँस भएर बाँचिरहेका छन् । कति माछा भएर पौडिंदै छन् । कति चरा भएर उड्दै छन् । म मान्छे भएर बसेको छु ।
गनेस : यसको अर्थ ब्रह्मा एउटा मात्रै रहेनछन् । अनेक रहेछन् ?
रोशन : तपाईं लेखक भैटोल्ने तर यस्तो सामान्य कुराको पनि हेक्का नराख्ने ? कस्तो अपठित लेखक हो तपाईं ? पुराणमा भनिएकै छ त, संसारमा अनेकन् ब्रह्माण्ड छन् । हरेक ब्रह्माण्डमा एक—एक ब्रह्मा छन् ।
गनेस : कुन पुराणमा ? पुराणै १८ वटा छन् ?
रोशन : तपाईं साँच्चैको लुतुरे लेखक हो । ब्रह्माण्ड उत्पत्तिको कुरा भविष्य–पुराणमा हुन्छ त ? ब्रह्मा–पुराणमै हुन्छ नि !
गनेस : हैन ठीकै छ । नरिसाउनुस् न । ब्रह्माजीको कुरा आइहाल्यो । विषय पनि हलुका गरी फेरिहालौं न । यी धर्महरू जुन छन् संसारमा, ती कसरी उत्पत्ति भए भनेर बताइदिन सक्नुहुन्छ ?
रोशन : आजलाई सक्दिनँ । धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ । पछि कुनै दिन । तर तपाईंलाई आजको कुराकानी सक्नुअघि एउटा उपहार दिन्छु । भौतिक उपहार होइन नि फेरि । सूचनाको उपहार । त्यो के भन्देखिन मैले तपाईंले पुज्ने गरेको जुन गौतम बुद्ध छन्, तिनलाई भेटेको छु ।
गनेस: तपाईंको कतियौं जन्ममा ?
रोशन : गनेको छैन । गन्नुपर्छ । गनौं ?
गनेस : नाइँ पर्दैन । उनको जन्म इपू ५६३ मा भएको हो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ । बुद्धका बाँकी कुरा भन्नुस् न बरु ।
रोशन : त ठीकै छ । गौतम बुद्ध जो छन् ती अहिले चित्रमा वा मूर्तिमा देखाए जस्तो थिएनन् । उनी पहेंलो वर्णका थिए । मलाई उनी साह्रै मन पर्थे । तर मलाई उनको अनुयायी भएर हिंड्न मिल्दैनथ्यो किनकि त्यो बेला म एक स्त्री थिएँ । त्यसमाथि विवाहित र गर्भवती । तर मेरो लोग्ने उनको पछि लागेर हिंडे । दुईटा बालबच्चालाई मैले स्याहारें ।
गनेस : एकछिन रोक्छु ल । तपाईं ती स्त्रीबाट मात्रै जन्मेको त पक्कै होइन । उनको लोग्नेको पनि योगदान होला । त्यो लोग्ने पनि तपाईंकै जन्म हुनुपर्ने होइन ?
रोशन : हो । अवश्य हो । ती स्त्री र पुरुषको दुवैको म दोस्रो सन्तान थिएँ । तर जिनेटिकल्ली स्पिकिङ, ती दुवै स्त्री पुरुष पनि म नै थिएँ । फरक के मात्रै हो भने उनीहरूको जीनबाट मेरो मस्तिष्कमा त्यतिबेलासम्मको मात्रै स्मृति पुस्तान्तरण भएको छ, जतिबेला मेरो भ्रूण बीजारोपण भएको थियो ।
कुरो कसरी बुझ्नुस् भने, अनुवांशिक हिसाबले भन्दाखेरी, तपाईंले सन्तान नजन्माउँदासम्म सँगालेको स्मृति मात्रै सन्तानमा पुस्तान्तर हुन्छ । सन्तान जन्मिसकेपछि तपाईंले मोक्ष नै भेट्टाए पनि त्यो पुस्तान्तरण हुँदैन ।
गनेस : त्यतिविघ्नै व्याख्या पनि गर्नुपर्दैन । यति कुरा त बुझ्छु म पनि । मलाई गौतम बुद्धको बारेमा कुनै रोचक कुरा भन्दिनुस् न । जो कुनै धर्मग्रन्थमा नभेटिओस् ।
रोशन : धर्मग्रन्थमै नभेटिने जिम्मा लिन त सक्दिनँ किनकि मलाई बौद्धमार्गीका सबै ग्रन्थ कण्ठै छैन । तर एउटा कुरा भन्छु । बडो रमाइलो कुरा छ, बुद्ध जो थिए उनी पनि मैले जस्तै आफ्ना अनेकन् पूर्वजन्मका कथा सुनाउँथे ।
गनेस : के ती सत्य कुरा थिए ? तपाईं त जैविक अस्तित्वदेखिकै सम्झना राख्नुहुन्छ । तपाईंको कुनै जन्ममा बुद्धका कुनै पूर्वजन्मसँग तपाईंको भेट भयो ?
रोशन : सबैसँग भएन । तर एकजनासँग झुलुक्क भेट भयो ।
गनेस : यसको अर्थ गौतम बुद्धले सत्य कुरा भनिरहेका थिए । उनलाई पनि जिनेटिक मेमेरी हुन्थ्यो ?
रोशन : हुन सक्छ । आखिरमा ध्यान गर्ने भनेकै अस्तित्वको आदिरुपको खोज गर्नु न हो । अन्तरात्माको अनन्तयात्रामा निस्कनु त हो ।
गनेस : हामी आजको कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौं । म्याग्जिनको लागि हुनाले धेरै लामो लेख्ने कुरा पनि भएन । अरू कुरा पछिका अन्तर्वार्तामा राखुँला । एउटा रमाइलो प्रश्न मनमा आइहाल्यो । यी रूख बिरुवा, जनावर पक्षी जुन तपाईंले अहिले खानुहुन्छ तिनलाई खाँदा तपाईंलाई आफैंलाई खाएजस्तो वा आफ्नै वंशजलाई खाएजस्तो लाग्छ होला हैन ?
रोशन : म त कहिल्यै त्यसरी सोच्दिनँ । मलाई कहिल्यै धान भएको, स्याउ भएको, कुखुरा वा बाख्रा भएको सम्झना छैन । म कहिल्यै बाँदर भएर, कुकुर भएर, सर्प आदि भएर जन्मँदै जन्मिइनँ । मेरा अघिल्ला जन्महुँदा यिनीहरूको ‘इभोलुशन’ भएकै थिएन । भलै यीमध्ये कतिका पुर्खा र मेरा पुर्खा एउटै थिए होलान्, अर्थात् यी र म कुनै बेला एउटै थियौं पनि होला ।
जहिले म पहिलो पटक जन्में । त्यो बेला म मात्रै जन्मेको थिइनँ । मजस्ता अनेकन् जन्मेका थिए भनेर मैले अघि नै भनिसकें । तर मजस्तै गरी तिनीहरू पनि अचानकसँग जन्मेका थिए । तीमध्ये कति अहिले बाँस भएर गाँजिएका छन् कति गाई वा भैंसी भएर घाँस खाइरहेका छन् । कति फूल भएर फुलेका छन् कति पुतली भएर उडेका छन् । तिनको निक्र्योल म गर्न सक्दिनँ । म वैज्ञानिक होइन । अनुवांशिक स्मृति खुलेको भए पनि म तपाईं जस्तै आम मान्छे हुँ ।
गनेस : लास्ट फर द रोड भन्छन् ? यो माहुरीलाई चास्नी किन खुवाएको नि ? यस्तो अचम्मको सोख हुने तपाईं पहिलो मान्छे देखें ।
रोशन : मैले हरेक मानवीय जन्ममा माहुरीलाई चास्नी–भोज दिंदै आएको छु । करिबन १४ करोड वर्ष पहिले पृथ्वीमा फुलेका अनेकन् फूलको पहिलो पारखी माहुरी थियो । तपाईंका वैज्ञानिकहरू त्यसलाई क्रेटासियस पिरियड भन्छन् । माहुरी देख्दामा तपाईं एक्लै देख्नुहुन्छ तर खासमा माहुरीको पूरै घार एउटा सग्लो जीव हो । तपाईंले देख्ने माहुरी त त्यसको एउटा अंग मात्रै हो । माहुरी एक सुपर अर्गानिजम हो । हुन त माहुरी जस्तै हामी पनि सुपर अर्गानिजम नै हौं । तर हामीले त्यो सामूहिक अस्तित्वलाई बिर्सियौं । हामी एकलकाटे भयौं, आफैंलाई सम्पूर्ण ठान्ने भयौं । यो हाम्रो भ्रम सिवाय केही होइन ।
मलाई पनि के अनुभूति हुन्छ भने माहुरीलाई भोज खुवाउनु जस्तो निमग्न अस्तित्वको आराधना अर्को छैन ।
सुखी हुन मान्छेलाई कति नै पो स्मृति चाहिन्छ र ? आखिरी अवस्थामा सम्झनका लागि एकाध प्रियजन भए पुग्छ । स्मृतिले सूचना दिन्छ विवेक दिंदैन । विवेकको अनुवांशिक पुस्तान्तर हुँदैन ।
त्यसो त अनुवांशिक तबरले मात्रै पनि हाम्रा सबै ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तण नहुने रहेछ । रोशनले भनिसक्यो कि सन्तानको बीजारोपण हुनुपूर्वको ज्ञान, सीप र अनुभव मात्रै हो पुस्तान्तरण हुने । त्यसो भए सन्तानको जन्मपछिको हामी को ? हाम्रो अनुवांशिक मूल्य के ? हाम्रो अस्तित्वको अर्थ के ? के माकुरासरी हामीले पनि अनुवांशिक मृत्यु भोगिरहेका हुन्छौं ?
हामी आफ्ना सन्तानहरू मार्फत पटक पटक जन्मिरहने अवश्य रहेछौं तर सम्पूर्णतया होइन । हामी पहिलेभन्दा फेरिएर जन्मिने रहेछौं । नपत्याए मेरै मानस–पुत्र रोशनलाई हेर्नुस् । ऊ मेरो मानस पुत्र हो तर उसको अनुवांशिक स्मृतिमा मेरो स्थान कतै छैन । जसलाई मैले जन्माएको छु, उसको अघिल्तिर म एउटा अबुझ लेखक सिवाय केही होइन । रोलाँ बार्तले ‘अथर इज डेड’ अर्कै विवेचनाको प्रसंगमा भने होलान् तर यसको आवश्यकता र सान्दर्भिकता मलाई अचेल हुन थालेको छ ।
रोशनसँगका बाँकी वार्तालापलाई म क्रमैसँग प्रकाशित गरिरहनेछु । उसलाई सोध्न सकिने कुनै प्रश्न तपाईंसँग छन् भने मलाई ‘मेसेज’ गर्नुहोला ।